#Atomicchat: Ọdịnaya Emepụtara Onye Ọrụ | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị soro m na Twitter, anyị na ndị folks nwere mkparịta ụka dị oke nkata na Atomic Reach na-ekwu maka ọdịnaya Onye Ọrụ Na-eweta (UGC). Ndị a bụ isi ihe na isi ihe si na #AtomicChat Nkata Twitter, kwadoro Kwa abalị Monday ọ bụla na 9pm EST / 8pm CST / 6pm PST. soro @Onyedikachik maka mmelite ịre ahịa ọdịnaya gị niile!
Short maka ihe njirimara nke onye ọrụ, UGC bụ okwu ejiri kọwaa ụdị ọdịnaya ọ bụla dị ka vidiyo, blọọgụ, ụdị mkparịta ụka mkparịta ụka, onyonyo dijitalụ, faịlụ ọdịyo, na ụdị mgbasa ozi ndị ọzọ nke ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ njedebe nke usoro ntanetị ma ọ bụ ọrụ mepụtara ma bụrụ n'ihu ọha maka ndị ọzọ na-azụ ahịa na ndị ọrụ njedebe. A na-akpọkwa ọdịnaya ndị ọrụ na-eme ka ndị na-emepụta ihe (CGM). Webopedia
ekele Nweta Atomic maka nnukwu ohere ọzọ!
Tags: eburu atomatọmdouglas karrdouglaskarrtweet nkataTwitternkata twitteruGConye ọrụ mepụtara ọdịnaya